Safal Khabar - पोखरीको डिलमा फालिएको अवस्थामा भेटियो १० लाख रूपैयाँ
पोखरीको डिलमा फालिएको अवस्थामा भेटियो १० लाख रूपैयाँ
बिहिबार, ०८ जेठ २०७७, ११ : २१
गौर । रौतहटमा एक पोखरीको डिलमा १० लाख १० हजार नगद रूपैयाँ प्रहरीले फेला पारेको छ । इशनाथ नगरपालिकाको परोहाको डुमरीयास्थित पोखरीको डिलमा फालिएको अवस्थामा प्रहरीले १० लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको हो ।
डुमरीया माइस्थान चोकसँगै रहेको पोखरी छेउमा २ जना व्यक्तिहरू प्रहरीलाई देखेर भागेपछि प्रहरी पुग्दा सो स्थानमा पैसा छरिएको फेला परेको थियो । फालिएको रकम ती दुबै व्यक्तीको हुनुपर्ने प्रहरीको जनाएको छ ।
ईशनाथ नगरपालिका कार्यालय अगाडि गस्तीमा रहेको प्रहरीले ना ५४ प २११६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार २ जनालाई रोक्न खोजेको थियो । तर, उनीहरू रोकिएनन् । प्रहरीले पछ्याउन थालेपछि डुमरीया माइस्थान चोकसँगै रहेको पोखरीको छेउँमा उनीहरु मोटरसाइकल छोडेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यहाँबाट बरामद रकम ईशनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुखको रोहबरमा गन्न लगाएको छ । रकम गन्दा १० लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको औरैयाका प्रहरी सहायक निरीक्षक ललित कुमार साहले बताए । बरामद भएको रकम र मोटरसाइकल प्रहरी चौकी औरैयामा राखिएको छ । फरार भएका व्यक्तिहरुको पहिचान हुन सकेको छैन ।
धौलागिरि क्षेत्रकै पुरानो पोखरी
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– १ स्थित रत्नेचौरमा रहेको बूढा पोखरी । यो पोखरी धौलागिरि क्षेत्रकै मानव...
१. ६ जिल्लामा १०० माथि कोरोना संक्रमित
२. गण्डकी प्रदेश सरकारले सागका पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित पुरस्कृत गर्ने
३. राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा निस्किए गैडाकोटका युवा, स्वर्गिय राजा वीरेन्द्रको सम्झनामा युवाको ताती
४. ५९ जिल्लाका एक हजार ८११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
५. बन्नेभो भरतपुर बिमानस्थल प्रदेश स्तरको
६. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाढ्न काठमाडौँ महानरपालिकाका जनप्रतिनिधि जनताको घर–दैलोमा
७. इरानमा २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमितकोे सङ्ख्या झण्डै तीन हजार
८. ‘कोरोना भाइरस अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पको प्रतिकुल हुनसक्ने’
९. एमसीसीले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य अखडामा बदल्न सक्ने भन्दै दस दलको विरोध